အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: စာဖတ်နေရင်းနဲ့ ကြံမိတဲ့အကြံ
တို့တွေရဲ့ အုပ်စုနာမည်က ခုချိန်မှာ အားကိုးလို့ကမရ...၊
နှစ် ၃၀ လုံးလုပ်စားထားတာ..
ဒီတစ်ခါဆို နိုင်ငံတကာက.. ဖဲ့မှာကိုလည်း..
ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်ကူးကတော့ ဖြူးနေတာပဲ....
အရင်လို လက်ညိုးညွန်ရာ ရေဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကူး..၊
လူစိမ်း တွေဝင်ရှင်းရင် ..
"နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပိတ်မှရမယ်. ဖျက်မှရမယ်..မောင်ရင်ငရွှေရေ"..လို့..
နှစ် ၃၀ မြဲခဲ့တာပေါ့..ဟဲဟဲ..၊(အဲသလို...မာန်တက်မိသေးတာပ..)
ဒီငါးနှစ်ကလဲ အီးရောအီးရောနဲ့ ကုန်တော့မှာ..၊
ခေါင်းပူအောင် Heat တက်အောင်စဉ်းစား..၊
အကြံတစ်ချက် "လက် "ကနဲပေါ်လာ..၊
တစ်ချက်ခုတ်ရင် ၃ ချက်အထိပြတ်နိုင်တဲ့အကြံ..၊
ငါမွေးထားတဲ့ နွားတွေကိုလဲ ..အသုံးချရမယ်..
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 12:44 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook